mandritra ny fihibohana. Efa tany amin’ny volana martsa no niresahana an’izany, saingy ny hita sy miharihary aloha, dia toa tsy nisy fanamboarana natao, raha ny hita eto Antananarivo Renivohitra. Betsaka ireo làlana feno lavadavaka, ao ny potika tanteraka, saingy toa tsy dia nisy fikitihina sy fanamboarana akory. Ny tetikasa nataon’ny fanjakana teo aloha no toa hany fikojakojana sy fanamboarana nisongadina. Zary lasa adihevitra ny zava-misy ankehitriny hoe: sao dia ny fanamboarana ny simba aloha no tokony himasoana fa tsy ny fandrodanana ny efa mijoro ?